WellnessFASS | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
6. June 2014 WellnessFASS	မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
ကျန်းမာအတူပေါင်းစပ် Velo အားလပ်ရက်
ရေကူးကန်မှအခြားရွေးချယ်စရာ – သင့်ရဲ့နောက်ဖေးတစ်ပူရေချိုးစည်
5. June 2014 WellnessFASS	မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
သင့်ရဲ့နောက်ဖေးတစ်ပူရေချိုးစည်ရေကူးကန်မှစံပြအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်. နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်ရှိမရှိ, သစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူပူပြင်း tubs အမြဲပျော်စရာ
Aside 5. June 2014 WellnessFASS မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
အဆိုပါတောင်တက်ပြီးနောက်ပူ tubs ကနေ
အဆိုပါတောင်တက်သမားပူ tubs ခြင်းကိုနှစ်သက်သူ
ပူပြင်း tubs အတွက်ခရီးစဉ်အပြီးဆယ်ယူဖို့ကဲ့သို့တောင်တက်သမား
လူငယ်နှင့်အဟောင်းများအတွက် alpine တဲမှာပူရေချိုးစည်
ထို alpine တဲမှာပူရေချိုးစည်အတွက် recovery
BADEFASS ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden .. အာရဇ်ပင်ပူ tubs Clear ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်… (12,407)
ဥယျာဉ်ကိုပြုစု SAUNA သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌အဖြေသေးငယ်ကျန်းမာအိုအေစစ် .. စည်ပိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခွင့်ပြု… (6,489)
သစ်သားရေပူကန် မြောက်ပိုင်းကနေဒါ NATURA ကနေသစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူဂန္ပူ tubs အဆိုပါဖြစ်ပါသည်… (6,375)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ tubs အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကမ်းလှမ်းမှုသည်။… (6,058)
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးဧည့်သည်များတောင်းဆိုမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါပြီ. သင်ရှိသည်… (4,888)
သစ်သား WHIRLPOOL Classic နှင့်အချစ် - နည်းပညာနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း၏ရေချိုးအပျော်အပါးနှင့်ငြိမ်ဝပ်တွဲကိုစလှေတျ… (4,585)
စျေးနှုန်းစာရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစျေးနှုန်းစာရင်းပါဝင်သည်: hot tubs Pod ချွေးပေါင်းအိမ်တပ် ချ. ဥယျာဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် Huttengrill အိမ်သူအိမ်သားကင်တဲမီးဖို… (4,572)
Europa-line မဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးပြည့် .. ငါတို့၏ဥရောပလိုင်းအလိုလိုမြင်သည်အရာ. အရည်အသွေးမြင့်… (4,490)
နမူနာပုံများ အနောက်တိုင်းနီအာရဇ် Whirlpool မြို့ ဂျပန်ရေချိုး စျေးနှုန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင် စာရင်း တယ်လီဖုန်းနံပါတ် တူရကီ Primo ကင်ရောင်းချသူ Kiefer ဗီဒီယို အသက်ရှည် မှတ်တမ်း Primo ကင်ဂျာမနီနိုင်ငံ Nordic ထင်းရူး GartenSauna Dampfkabine ချမ်းသာရေးသင်တန်း Barrel ကိုးကား ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံများ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဥယျာဉ်တော်ရေချိုးခန်း ထိတှေ့ Bio-Sauna ရုပ်ပုံများ ဥရောပ စာတမ်းများ Suisse outdoor Sauna Badebottich Sauna မော်ဒယ်များ Badefass ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ရေရှည်တည်တံ့မှု PrimoGRILL ချမ်းသာရေးသင်တန်းသည်ဆိုင် သငေ်္ဘာခန်​​း DIY များ ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ မီးဖို outdoor Sauna partner ရေချိုးကန် မေးခြင်း Pod စခန်းချ